नयाँ गृहमन्त्री आएसँगै डिआईजीदेखि डिएसपीसम्म सरुवाको तयारी : कहाँ कसको सम्भावना ? - Kantipath.com
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा खगराज अधिकारी आएसंगै नेपाल प्रहरीको प्रदेश र समय पुगेका जिल्लाका नेतृत्व फेरबदलको तयारी थालिएको छ । २०७७ को बैशाखमा सरुवा भएर प्रदेश गएका डीआईजीहरु हालसम्म प्रदेशमै कार्यरत छन् ।
गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गत बर्ष २०७७ बैशाखमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका आठ डीआईजीहरुलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख र केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) मा पदस्थापन गरिएको थियो । जसअनुसार केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) मा सहकुलबहादुर थापा, एक नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा ईश्वरबाबु कार्की, दुई नम्बर प्रदेशमा धिरजप्रताप सिंह, बागमती प्रदेशमा बसन्तकुमार लामा, गण्डकी प्रदेशमा घनश्याम अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा रवीन्द्र धानुक, कर्णाली प्रदेशमा बसन्तकुमार पन्त र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा उत्तमराज सुवेदीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
एक वर्षमा प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी आएपछि उनीहरुको सरुवा प्रक्रियामा तिब्रता आएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र भएका हुनाले सरुवामा कुनै समस्या नहुने देखिन्छ । डिआईजीको सरुवा पश्चात एसएसपी, एसपी हुँदै डीएसपीसम्मै सरूवा हुने स्रोतको भनाइ छ । एसपीसम्म सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीलाई हुन्छ । नियमित समयमा सरुवा नहुँदा प्रहरीको ‘कमाण्ड कन्ट्रोल’ र कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् । डीआईजीहरुको सरुवा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने गर्दछ ।
संघीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपीहरु, आधा दर्जन भन्दा बढी जिल्लाका एसपी र केहि जिल्लाका डीएसपीले एक वर्ष अवधि विताइसकेका छन् । उपत्यकामा प्रहरी वृत्तको नेतृत्व गरिरहेका डीएसपी दक्षकुमार बस्नेत, हरिबहादुर बस्नेत, नविन कार्की, निराजनदत्त भट्ट, रोशन खड्कालगायतको पनि एक वर्ष अवधि पुगिसकेको छ । सोह्रखुट्टका डीएसपी दिपक खड्काको पनि एक वर्ष अवधि पुगिसकेको थियो । तर कारबाहीमा परेर जिम्मेवारी खोसिएको छ । उनको स्थानमा प्रमेश विष्ट गएका छन् ।
गृह मन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार सिआईबीमा कार्यरत सहकुलबहादुर थापाको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा सरुवा गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ । हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा निर्देशक रहेका थापा डीआईजीमा ब्याचको दोस्रो वरियतामा छन् । पहिलो बरियताका विश्वराज पोखरेल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनिसकेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत अरुणकुमार बिसिको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरमा, दुई नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा डीआईजी दिवेश लोहनीलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । एक नम्बर प्रदेशका डीआईजी ईश्वरबाबू कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध निर्देशनालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा ल्याउने तयारी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालका कर्णाली प्रदेशका डीआईजी बसन्तकुमार पन्त वा प्रवन्ध निर्देशनालयका डीआईजी पुरुषोत्तम कंडेललाई पठाउने बिषयमा गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा डीआईजी प्रकाशजंग कार्कीको सरुवा गर्ने तयारी छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी डीआईजी गणेशबहादुर ऐर र डीआईजी मुकुन्द आचार्य मध्ये एकलाई पठाउने तयारी भएको गृह निकट स्रोतले बतायो ।
कर्णाली प्रदेशमा डीआईजी प्रकाश अधिकारी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा डीआईजी डा. देवबहादुर बोहरालाई पठाउने तयारी भएको छ । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) मा सरुवा हुन धेरै डीआईजीहरुले इच्छा देखाएका छन् । स्रोतका अनुसार सिआईबीको नेतृत्वमा डीआईजी उत्तमराज सुवेदीको सरुवा हुने सम्भावना देखिएको छ । डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, धिरजप्रताप सिंह र बसन्तकुमार लामाको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा हुने छाँटकाट देखिएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई विशेष ब्यूरोको जिम्मेवारी लगभग पक्का जस्तै भएको छ ।
Previous Previous post: अन्नपूर्णमा काम गरेका पत्रकारहरूले बाँकी तलबभत्ता दिलाइदिन माग गर्दै विभागमा दिए निवेदन
Next Next post: वर्षाका कारण जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध